Nhau - ASUS RTX 3050 Ti-powered Strix G17 yemitambo laptop inorova nyowani yakaderera
Amazon parizvino iri kupa iyo Asus ROG Strix G17 Ryzen 7/16GB/512GB/RTX 3050 Ti Gaming Laptop ine shipping ye $1,099.99.Kazhinji mutengo unosvika $1,200 paAmazon, iyi $100 yekuchengetedza inoratidza kuderera-kwenguva kwatakaona palaptop iyi yemitambo. .Newegg parizvino inotengesa $1,255.Inopihwa simba neRyzen 7 5800H processor uye NVIDIA RTX 3050 Ti, iyo Strix G17 inopa masimba ayo 17.3-inch 1080p sikirini pane 144Hz refresh rate yekutsetseka kwegameplay.Wi-Fi 6 rutsigiro ruchaita kuti iwe uwane mheni- inokurumidza isina waya internet pamanetiweki anotsigirwa, uye Bluetooth 5.1 inogona kushandiswa kubatanidza mawireless accessories semahedhifoni, mbeva, kiyibhodhi, uye nezvimwe. USB 3.2 Gen 2 Type-C port ine DisplayPort inobuda uye Power Delivery, HDMI 2.0b port, 3.5mm combo audio jack hole uye Ethernet port.Verenga kuti uwane rumwe ruzivo.
Kana uchida kuchengetedza imwe mari, unogona kusarudza iyo ASUS TUF Dash 15 i7/8GB/512GB/RTX 3050 Ti Slim Gaming Laptop ye$941.Laptop yacho inofambiswa neIntel 11th Gen i7-11370H processor uye zvakafanana RTX 3050. Ti graphics kadhi semalaptops ari pamusoro, ane yakafanana 15.6-inch 1080p 144Hz kuratidzwa, uye system memory idonho rakakura, ine chete 8GB ye RAM inosanganisirwa. Thunderbolt 4 yekubatanidza ma peripherals e-high-speed or displays.Laptop iyi yakapfuura MIL-STD-910H yekuongorora madonhwe, vibration, humidity uye kupisa kwakanyanya, ichiwana zita remutambo weTUF.
Iva neshuwa yekushanyira PC yedu Gaming Hub kune ese azvino zvibvumirano zvehardware uye peripherals.Kana uchitsvaga kumwe kuvheneka kweRGB kuti uwedzere imwe ambience kuhofisi yako, unogona kubata Nanoleaf's Mitsetse mitsva yeKumbaKit Chiedza Starter Kit yemadhora zana nemakumi masere.
Nguva yekutumira: Jun-08-2022